AI ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ဖျားနာခြင်းစစ်ဆေးခြင်းအနီအောက်ရောင်ခြည်အပူကင်မရာကိုထုတ်လုပ်သူနှင့်ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်စက်ရုံ - Mapesen
နေအိမ် > > အနီအောက်ရောင်ခြည်အပူအပူကင်မရာ > Infrared Theme ကင်မရာ AI ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ဖျားနာခြင်း
Mapesen သည် AI ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်အဖျားကိုစစ်ဆေးသည်အနီအောက်ရောင်ခြည်အပူကင်မရာကိုပစ်မှတ် ၂-၃၀ ဖြင့် CE FCC RHOS အရည်အချင်းဖြင့် ၃ နှစ်အာမခံချက်ဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်တိုင်းတာခြင်းကိုရင်ဆိုင်နိုင်သည်။ CCTV ထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ခြင်း၊ အရည်အသွေး၊ ဆန်းသစ်တီထွင်ခြင်း၊ ၀ န်ဆောင်မှုများအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ခြင်းဖြင့် ၈ နှစ်ကျော်အတွေ့အကြုံရှိသောကျွန်ုပ်တို့တွင်အမှတ်တံဆိပ်အေးဂျင့်များနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ OEM မိတ်ဖက်များရှိသည်။
၁။ ထုတ်ကုန်နိဒါန်း AI ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ဖျားနာခြင်းစစ်ဆေးခြင်းအနီအောက်ရောင်ခြည်အပူကင်မရာ
ဒီ AI ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်အဖျားမျက်နှာပြင်အနီအောက်ရောင်ခြည်အပူကင်မရာကိုအဆက်အသွယ်မရှိတဲ့သူတွေကခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ကိုတိကျစွာ detect လုပ်ဖို့၊ မျက်နှာပုံနဲ့ဒီလူတွေရှေ့မှာမှတ်တမ်းတင်ထားသူတွေကိုဒီကိရိယာရဲ့ရှေ့မျက်နှာစာပေါ်လာစေဖို့၊ ၂၀-၃၀ မျက်နှာပြင်တစ်ပြိုင်တည်းကြည့်နိုင်ဖို့၊ ပုံမှန်အပူချိန်၊ နှိုးစက်၊ တိကျမှန်ကန်မှုနှုန်း± 0.3 ° C နှင့်အနက်ရောင် ၀ တ္ထုအပူချိန်ညှိနှိုင်းမှုဖြင့်± 0.1 ° C အထိတိကျမှု။ CCTV ထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ခြင်း၊ အရည်အသွေး၊ ဆန်းသစ်တီထွင်မှု၊ ၀ န်ဆောင်မှုများအပေါ်အာရုံစူးစိုက်မှု ၈ နှစ်ကျော်အတွေ့အကြုံရှိသော Mapesen သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိအမှတ်တံဆိပ်အေးဂျင့်များနှင့် OEM မိတ်ဖက်များရှိသည်။
2. AI ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်အဖျားရောဂါစစ်ဆေးခြင်းအနီအောက်ရောင်ခြည်အပူကင်မရာ
VOx Uncooled အပူ အာရုံခံကိရိယာ Technology
â‰60mk (@ 25℃，F # = ၁.၀)
ပစ်မှတ်အပူချိန်: 35℃-38℃, တိကျမှန်ကန်မှုကို± 0.3℃;
ပစ်မှတ်အပူချိန်: 20℃-33℃သို့မဟုတ် ၃၈ နှစ်℃-50℃, တိကျမှန်ကန်မှုကို± 0.6℃;
အခြားအပူချိန် - တိကျမှု± ၂℃
အလျားလိုက်ထောင့် ၃၅°, ဒေါင်လိုက်ထောင့်: 27 °
Blackhot / Whitehot / Ironrow / Rainbow စသဖြင့်၊ အရောင်မျိုးစုံရွေးချယ်နိုင်သောအရာများ
1 / 2.8â Progressive Scan CMOS
25fps @ 1920x1080P
အလျားလိုက်ထောင့်: 84°, ဒေါင်လိုက်ထောင့်: 45 °
[email protected]အရောင်မုဒ်၊ [email protected] (ခ / ဝ)
â 80dB â
Built-in DL AI algorithm, 20-30pcs မျက်နှာမျက်နှာပြင်စစ်ဆေးခြင်း, မျက်နှာရှာဖွေတွေ့ရှိမှု, ထိတွေ့မှု, ရမှတ်, စိစစ်, လျှပ်တစ်ပြက်နှင့်အပ်လုဒ်ကို, FTP, HTTP ကိုထောကျပံ့, စသည်တို့လူ့မျက်နှာ, ပခုံး, ခါးအထက်, တစ်ကိုယ်လုံးတင်ပို့ရန် multi- နည်းလမ်း။ ဓါတ်ပုံများ၊ မူရင်းပုံ၊
မြင့်မားသောအပူချိန်ကန့်သတ်ချက်များ, နိမ့်သောအပူချိန်ကန့်သတ်, ၏အပူချိန်ခြားနားချက်
ပံ့ပိုးမှု RTSP, RTP, TCP, UDP, UPNP, DHCP, PPPoE protocol စသည်တို့ကို
1CH 10/10 BaseT Ethernet, RJ45 ဆိပ်ကမ်း
1CH input ကို / output ကို
-20 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် ~ 55 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
IP67; TVS 6000V Lightning Protection, 2K Surge Protection နှင့် Voltage ယာယီကာကွယ်မှု
3. Product Feature And Application ofအာအိုင်Body Temperature Fever Screening Infrared အပူ Camera
- မြင့်မားသောဘေးကင်းလုံခြုံမှု၊ အဆက်အသွယ်မရှိသော၊ မျက်နှာပြင်နှစ်ခုမြင်ကွင်း
- မြင့်မားသောတိကျသောခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်တိုင်းတာခြင်း ၃၅ - ၃၈ ƒ၊ တိကျမှု - ၀.၃ â၊ အနက်ရောင်ခန္ဓာကိုယ်ဖြင့် - 0.1 0.1 â) ။
- စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားပြီးပစ်မှတ်ပေါင်း ၂၀ မှ ၃၀ အထိလူ့မျက်နှာများကိုတစ်ပြိုင်တည်းစစ်ဆေးခြင်း Snapshot ။
အဆောက်အ ဦး များ၊ စက်ရုံများ၊ ဘူတာရုံများ၊ လေဆိပ်များ၊ ဆေးရုံများ၊ စျေးကွက်များ၌လျင်မြန်စွာနှင့် ကြိုတင်၍ ဖျားနာခြင်းများကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ကျောင်းများနှင့်အခြားအများပြည်သူသောနေရာများ။
5. Product Qualification ofအာအိုင်Body Temperature Fever Screening Infrared အပူ Camera
Over 8 years’ experience in manufacturing CCTV products,Mapesen are with strictly quality control system to ensure every delivered products performing well and passed ISO9001. For all production,our QC and IQC department will inspect and control all of the procedures from the income materials to the finish products,and ensure 100% aging until the quality is meeting the requirement.Our AI Fever Screening အပူ Camera is all CE,FCC,RHoS qualified,and obtained high praise from customers.
ဟုတ်ပါတယ်၊ အရောင်အသွေးစုံလင်တဲ့နေ့၊ ညညကင်မရာပါ။
ဒီအပူကင်မရာ TF ကဒ်သိုလှောင်မှုကိုအထောက်အကူပြုနိုင်သလား?
hot Tags:: AI ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်အဖျားအဖျားစစ်ဆေးခြင်းအနီအောက်ရောင်ခြည်အပူကင်မရာ၊ ထုတ်လုပ်သူ၊ ပေးသွင်းသူ၊ စက်ရုံ၊ တရုတ်, လက်ကားရောင်း၊
Ai ဖျားနာခြင်းအနီအောက်ရောင်ခြည်အပူကင်မရာ Ai ကိုစစ်ဆေးခြင်း
အနီအောက်ရောင်ခြည်အဖျားရောဂါစစ်ဆေးခြင်း Ai Thermal Imaging Camra
Multi-target Fever စိစစ် Infrared Thermal Imaging Camera
မိုးလုံလေလုံမှန်ဘီလူး Ai Thermal Camera